Global Voices teny Malagasy » Niezaka Hanolo Ny Facebook Ny Tranonkalan’Ny Media Sosialy Ao Uzbekistan · Global Voices teny Malagasy » Print
Niezaka Hanolo Ny Facebook Ny Tranonkalan'Ny Media Sosialy Ao Uzbekistan
Voadika ny 10 Mey 2016 16:44 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Ozbekistan, Mediam-bahoaka, Politika
Fakebook. Sary tamin'ny Wikipedia .
Ity manaraka ity dia lahatsoratry ny mpiara-miombon'antoka  avy amin'ny EurasiaNet.org  . Nahazoana alalana.
Ao anatin'ny ezaka hanintonana ny mpisera aterineto hanalavitra ny toerana tsy voafefin'ny media sosialy, namoaka ny mitovy amin'ny Facebook azy manokana i Uzbekistan. Iray hafa.
Nitatitra  ny tranonkala momba ny teknolojia ICTNews fa navoaka tamin'ny herinandro lasa nandritra ny fihaonamben'ny haivarotra nomerika USENET-2016 fanao isan-taona ao Tashkent ny Davra.uz .
Hampiaraka ny teknolojian'ny fifandraisana farany amin'ny fomba amam-panao eo an-toerana ny Davra.uz, hoy ny mpamorona ny tranonkala.
“Saingy niteraka adihevitra teo amin'ny olona sasany [nandritra ny USENET-2016] ny fananganana izany tambajotra sosialy vaovao izany,” hoy ny ICTNews. “Nisy fomba fijery nipongatra fa nanome làlana be dia be amin'ny rindrambaiko fandefasan-kafatra ny tambajotra sosialy teo amin'ny sehatry ny laza, ka nahoana no mamorona sehatra media sosialy hafa rehefa afaka mamorona fandefasan-kafatra vaovao ihany ?”
Eny tokoa, amin'ny zava-drehetra, be loatra ny vohikalan'ny media sosialy ao Uzbekistan.
Araka ny foibe fampandrosoana ny teknolojia vaovaon'ny governemanta, UZINFOCOM, misy 38 ny sehatra media sosialy ao an-toerana misoratra anarana ao Ozbekistana, kanefa ny valo amin'ireo ihany no velona ankehitriny.
Muloqot.uz no mpitarika ny tsena ao an-toerana, izay manana mpisera manodidina ny 172.000, manaraka azy Myjob.uz, karazana LinkedIn ao an-toerana izay manana mpikambana 60.000. Ny vavahadin-tserasera momba ny fanabeazana no eo amin'ny toerana fahatelo, Ziyonet.uz, manana mpanjohy 57.000.
Raha ny marina anefa, mampiasa ny tranonkala vahiny foana toy ny Facebook sy tranonkala Rosiana mitovy amin'izany, Odnoklassniki, ny ankamaroan'ny olona ao Ozbekistana . Ny Uzbek mpisera Odnoklassniki no betsaka indrindra ao Azia Afovoany.
Raha ny tombana sasany, hatramin'ny 2 tapitrisa isan'andro ny olona ao Ozbekistana no miditra Odnoklassniki. Manodidina ny 7,5 tapitrisa ny mpisera voasoratra anarana ao amin'ny firenena.
Nahavita nahatakatra mpisera 300.000 fotsiny ny dika Uzbek mitovy amin'ny Odnoklassniki hatramin'ny 2012, na dia teo aza ny ezaka tsara indrindra nataon'ny manam-pahefana, izay nahita ny tranonkala media sosialy vahiny ho mety ho loharanon'ny fanakorontanana.
Nanombana ny manam-pahefana misahana ny fifandraisana fa 13 tapitrisa ny olona ao Ozbekistana afaka mampiasa aterineto. 22 tapitrisa ihany koa ny olona ao Ozbekistana nisoratra anarana ho manana finday.
Misy fifanoheran-kevitra ihany ny fihetsiky ny manam-pahefana manoloana ny aterineto. Nanahy hatrany ny loza ateraky ny tranonkala toy ny Facebook ,Odnoklassniki sy Twitter ny governemanta nefa mahatakatra ny maha zava-dehibe ny aterineto amin'ny hoavin'ny toe-karena. Anaovana fifanakalozan-kevitra amin'ny fahitalavitra sy amin'ny gazety matetika ny loza eritreretiny ho mety ho ateraky ny tranokalan'ny media sosialy.
Efa fantadaza amin'ny karazany ny filma Odnoklassniki tamin'ny 2013, novokarin'ny trano famokarana Uzbekfilm tantanin'ny fanjakana. Ireo mpilalao fototra ao amin'ny sarimihetsika dia vondrona tanora voafandrika tao anatin'ny sehatra fanondranana olona noho ny fitiavany ny media sosialy.
Tamin'ny volana Novambra 2014, nandany volavolan-dalàna natao “mba hiarovana ny ankizy amin'ny vaovao izay mety hitondra fiantraikany ratsy eo amin'ny fivoarana ara-batana sy ara-panahy” ny parlemanta. Natao izany mba hisakanana ny ankizy tsy hahazo vahana amin'ny fidirana amin'ny “lalao an-tsary mampiseho habibiana” sy ny sary mamoha fady hoy mpanohana ny volavolan-dalàna. Ao amin'ny rafitra adika avy any Rosia, milaza ihany koa ilay lalàna fa tsy maintsy asiana soratra ny amin'ny mety ho sokajin-taona kendrena amin'izany ny votoatin'ny haino aman-jery rehetra.
Ny firafitr'isan'ny mponina ao Ozbekistana no mahatonga ny governemanta mijery manokana ny fiarovana ny tanora, indrindra fa ny olana ateraky ny hevitra avy any ivelany. Latsaky ny 18 taona ny manodidina ny 40 isan-jaton'ny mponina. Ary efa ho 65 isan-jato no eo ho eo no mbola handalo 30 taona.
Ampahany betsaka amin'ny mponina no nihalehibe tamin'ny aterineto namolavola ny fivelaran-tsainy teo amin'ny fiainany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/10/82255/
 lahatsoratry ny mpiara-miombon'antoka: http://www.eurasianet.org/node/78666